Abuur dhibaatada, ka dibna ku dalac xalka | Martech Zone
Abuur dhibaatada, ka dibna ku dalac xalka
Talaado, Febraayo 14, 2006 Talaado, Oktoobar 21, 2014 Douglas Karr
Read more at Tooska ah ee OneCare, softiweer ay kujiraan cusbooneysiinta antivirus, keydinta, cusbooneysiinta, & adeegga macaamiisha. Waxaan u maleynayaa in Microsoft ay ugu dambeyntii aqbashay xaqiiqda ah inaysan abuuri karin barnaamij weyn oo ay ku kacayso lacag aad u badan. Waxaan u maleynayaa in xalka kaliya ee macquul uu yahay in Microsoft ay la soo baxdo shey kale oo aan lacag ku bixino si ay gacan uga geysato maaraynta dhibaatooyinka ay abuureen markii hore.
Tani, asxaabteyda wanaagsan, waa isku dhac guud oo xiiso leh. Waxaan u maleynayaa inay la jaan qaadayaan madaxdeena ku sugan Washington oo diyaarinaya biilal ay kula dagaallamaan musuqmaasuqa. Walaaca buuxa ee halkan ka jira ayaa ah in Microsoft ay si dhab ah uga faa'iideysan karto ka tagista wareegyada amniga iyo dhibaatooyinka ku jira barnaamijkeeda u gaarka ah ee qaadan lahaa waqti kale in la helo antivirus iyo kuwa horumariya amniga. Taasi waxay Microsoft ka dhigeysaa meesha ugu sareysa ee adeeggan. Waxay garaaci kartaa tartanka oo waxay u noqon kartaa dhaq dhaqaaq kale oo faa'iido leh Microsoft.
Cajiib. CIDNA ma daawaneysaa waxaas? Qofna?
CSS Style ee Code on your Blog
Febraayo 14, 2006 saacadu markay tahay 10: 35 AM
Tani waxay i xasuusineysaa iibiyeyaasha safarka ah ee safarka ah ee ku daadinaya boorso qoryahaaga roogaaga, sidaas darteed waxaa kugu waajib ah inaad aragto demo.
Sidee 'u ciribtiri karaa dabar-gooye keenaya dhammaan jiirka iyo cayayaanka isaga ka hor, ka hor intaan la bixin adeegga?
Waddo loo maro Micro $ badanaa! Hadda waxaad ka mid tahay horyaalada '30s Chicago 'gansters ku cararaya dadweynaha "lacag ilaalin" - haddii kale, waxaa laga yaabaa inay jabiyaan Windows.